Hoyga Barashada Tawxiidka - (3) Diintu ma xaqiiqa jirtaa, mise waa dad caadadi?
Hoyga Barashada Tawxiidka
Dadka booqanaya webka
We have 64 guests and one member online
(3) Diintu ma xaqiiqa jirtaa, mise waa dad caadadi?
1) Dad baa waxay Diinta Islaamka moodeen, caado iyo dhaqan ay leeyihiin ummadaha qaarkood. Sida la og yahayna caadooyinka iyo dhaqammadu waa is beddelaan, waayo dadku waa maslaxa raac, oo hadba waxay dan moodaan, bay xaggiisa u bataan, oo caadaystaan.
Aragtidaa qaldan baa waxay ku bixisay, inay duraan oo ceebeeyaan, qofka ay arkaan inuu ilaalinayo amarrada Diinta, iyagoo yiraahda: “waa meel ku dheg”, “waa midaan dunida la socon”, “waa danbeeye”, “waa dib u socod” iyo wax la mid ah.
Iyagoo wax walboo uu Rabbi sheegay, ku dhiirran diidmadiisa, qirayana inayan raalli ka ahayn, hoggaansanna ayan dooneyn, bay dhan kale waxay sheeganayaan, inay yihiin “muslimiin”, ama “muslimiin hor u socod ah”
Diinta iyagoo aan fahmin, bay iska sheegteene, sidaa uma ayan hadleen. Waxayan garan: “Allaah” inuu yahay, kan caalamkoo dhan abuuray, xaqna u leh inuu taliyo keligi, oo uu addoommadiisa wax amro, waxna ka reebo.
-" أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" (الأعراف:54) -" قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ" (آل عمران:154)
-" بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا" (الرعد:31) -" لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ" (الروم:4)
2) Kuwaa inay habawsan yihiin, arrimaha aad ku ogaan kartid, waxaa ka mid ah kuwa soo socda:
Dad oo dhan waxay ogyihiin, inayan toosnayn, in qofka lagula qabsado talada maalkiisa, iyo carruurtiisa. Oraahda ah: “Waxayga anigaa u tashanaya”, waa gar meel loo dhaafo aan lahayn.
Dadka dunida kor jooga oo dhan, ama kor joogi jirey, waxay wada qireen – wax yar mooyee – inuu “Allaah” dunida abuuray, waxa dul saaranna cidi ka xigin, oo ay yihiin wax uu keligi leeyahay. Haddaba yaa talada uga xaq leh. Bal aayadaha si fiican u fiiri:
"أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ" ......... "قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لله"
Qofka ka soo horjeeda mabda’a oranaya:
“kan Caalamka abuurtay, baa ka talintiisa iska leh”, waa maxay mabda’a kaas ka xaqnimo badan, ee uu ku beddelan karo, ama uu ku qanci karo.
Ma wuxuu oran karaa, Rabbi waa laga awood badan yahay, ama waa laga turriinsho badan yahay, ama waa laga aqoon badan yahay?
Kii yiraahda intaa wax ka mid ah, waa midaan Rabbigiba aqoon, wuxuuna la mid yahay kan Rabbi jiritaankiisa oo dhan inkiraya, kufriga bayna ka siman yihiin. Hadduu isu yaqaan “muslim”, isagaa isu yaqaan, Rabbi agtise loogama yaqaan.
Haddii la oran lahaa:
“Rabbi baa Caalamka abuuray, isagaana taladiisa iyo xukunkiisaba iska leh, laakiin wax talooyin ah oo la raaco nooma jideyn, sidaa baan uga fursan weyney inaan wax jideyno, oo dhaqan amaanno, dhaqanna ceebayno ”.
Haddii sidaa la oran lahaana, waxaan loo oran karin:
waxaa na horyaal, kitaab dhamays tiran, wax walbana lagu caddeeyey. Weliba waxaa la socda caddayn ah: inuusan Rabbi oggolayn, in dadkiisa iyo dunidiisa ka talintooda, iyo wax u jideyntooda lagu qabsado, oo la sheegto “wax jideyn”.
Wuxuu “Allaah” yiri:
-" أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ" (آل عمران:83)
-" أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ" (المائدة:50)
-" أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ" (الشورى:21)
-" اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ" (الأعراف:3)
-" تِلْكَ آَيَاتُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللهِ وَآَيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ" (الجاثية:6)
Qof ogsoon inuu “Allaah” dadka abuuray, iskana leeyahay.
Oo ogsoon inaan cidi uga xaq lahayn wax u jideyntooda.
Oo misana ogsoon inuu kitaabka raaciddiisa u wada jideeyey.
Waa u caqli xumo inuu Rabbigi khilaafo, dadna raalli gesho, naftiisana been ku maaweeliyo.
Copyright © 2013. All Rights Reserved. www.towxiidka.com
Designed by Ina Da'ud.